च्याउखेतीबाटै वार्षिक रु १० लाख आम्दानी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
च्याउखेतीबाटै वार्षिक रु १० लाख आम्दानी
बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४ मा प्रकाशित !
२३ चैत​, काभ्रे । पनौती नगरपालिका– १२ खोपासीका ५३ वर्षीय कृष्णदास उलकले च्याउखेती सुरु गरेको झन्डै ३० वर्ष भयो । सुरुमा च्याउको बजार नभएका कारण उनले व्यवसायिकता दिन सकेनन्। हाल उलकले च्याउखेतीबाटै वार्षिक रु १० लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्।
“च्याउखेती गर्नसके मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ,” उनले भने । हाल १० वटा टनेलमा च्याउखेती गरेर उनले १० जनाको परिवारको खर्च धान्दै आएका छन भने ११ जनालाई रोजगारी समेत प्रदान गरेका छन ।
उलकले पाँच रोपनी जग्गामा च्याउखेती गर्दै आएका छन । युवा अवस्थादेखि नै अन्य जागिर छोडेर उनले च्याउखेती सुरु गरेका हुन । परिवारसँग बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निकै आनन्द आएको उनी बताउँछन्।
“च्याउखेती गरेकै छोराहरुले समेत रोजगारी पाएका छन्” उलकले भने । उनले कन्या जातको उत्पादन गरेका छन । सुरुमा उनले रु २० हजार लगानीमा च्याउखेती सुरु गरेका थिए । यथेष्ट आम्दानी हुन थालेपछि उलक व्यावसायिक च्याउखेतीतर्फ आकर्षित हुन ।
“जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदान उपलब्ध गराए च्याउखेती गर्न थप उर्जा मिल्ने थियो,” उनले भने । सुरुवातमा उनले च्याउ खेतीसम्बन्धी किताब पढेर व्यवसायको थालनी गरेका थिए । उनले ‘जय हारती माँ’ नामक उद्योग सञ्चालन गरी अहिले मासिक ३० हजार किलो च्याउ उत्पादन गरेर बनेपा बजारमा बिक्री गरिरहेका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिने
NEXT POST Next post: सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो बन्यो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ११:५४